पण्डितले अब नागरिकता हेरर मात्र विवाह गराउने ! - Lokpath Lokpath
२०७६, २४ कार्तिक आईतवार १३:२४
पण्डितले अब नागरिकता हेरर मात्र विवाह गराउने !
प्रकाशित मिति : २०७६, २४ कार्तिक आईतवार १३:२४
काठमाडौं । विवाहमा केटाकेटीको नागरिकताको प्रमाणपत्र हेरेर मात्र काम गर्न जाजरकोटका पण्डित सहमत भएका छन् । जिल्लामा बालविवाह गर्नेको सङ्ख्या दिनदिनै बढ्न थालेकाले प्रहरीसँगको सहकार्यमा पण्डितहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । विवाह गराइदिनुअघि जन्मदर्ता र नागरिकताको प्रमाणपत्र हेरेर मात्र विवाहको काम गर्न पण्डितहरु सहमत भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामबहादुर खत्रीले बताउनुभयो ।